kaomisionina famoahana ny karatry ny mpanao gazety : Nicolas Rabemananjara no lany ho filoha -
AccueilRaharaham-pirenenakaomisionina famoahana ny karatry ny mpanao gazety : Nicolas Rabemananjara no lany ho filoha
Vato dimy amin’ireo mpifidy enina no nandany ny tompon’ity haino aman-jery tsy miankina iray ity ho filohan’ny kaomisionin’ny famoahana ny karatra maha mpanao gazety, nandritra ny fivoriana faharoa izay notanterahin’izy ireo omaly. Lany ho mpitondra teny kosa ny solontena avy amin’ ny minisiteran’ ny serasera Mara Ravolamiranto, izay nitovy tamin’ny isa azon’ny filohan’ny kaomisionina ihany koa ny vato azony. Noho izany dia miroso amin’ny fikaonan-doha ny ezaka izay efa napetrany amin’izay ny kaomisionina taorian’ny fametrahana ny rafitra, dia ny famongorana ireo mpanao gazety hosoka izany, sy ny fanadiovana ihany koa ny tontolon’ ny asa fanaovan-gazety. Fantatra moa fa anisan’ny nodinihan’ny kaomisionina omaly ihany koa ny mikasika ny daty izay hamoahana ny karatra vaovao. Hiroso, ary hisy hatrany noho izany ny fivoriana izay hatrehan’ny eo anivon’ny kaomisionina, satria dia tapitra amin’ny taona 2017 ity ihany koa ny karatra izay nampiasaina teo aloha.
Fa niray zotra tamin’ity fivorian’ny kaomisionina ity ihany koa omaly maraina ny fivorian’ny biraon’ny Filankevitry ny Holafitry ny Mpanao gazety eto Madagasikara, nandritra izany izy ireo no nitondra soso-kevitra amin’ny hanafoanana ireo mpanao gazety sandoka sy mpisoloky. Anisan’izany ny tokony hanaovan’ny komity izay mitsangana amin’ny fanomezana ny karatra maha mpanao gazety ho lasitra sy ny lisitra
efa natomboky ny vaomieram-paritra vonjimaika notarihin’ny birao isam-paritanin’ny Holafitra, izay nanao fanisana ny mpanao gazety manerana ny Nosy. Nambaran’ny holafitry ny mpanao gazety hatrany fa tokony ho solontenan’ny holafitry anatin’io kaomity io, ny filoha nasionaly ho mpikambana mpanara-maso. Nambaran’ izy ireo fa izany rehetra izany no lazaina dia mba ho marina sy eken’ny rehetra, ary madio ny lisitry ny mpanao gazety izay avoakan’ny vaomiera natsangan’ny minisitera. Teboka faharoa, mba hanadiovana ny sehatry ny asa fanaovan-gazety, indrindra ny fanafoanana ireo mpanao gazety sandoka.
Hatsangana ny komity mpanara-maso
Noraisin’ny minisitry ny Serasera Harry Laurent Rahajason tao amin’ny biraony tetsy Nanisana ireo mpikambana mandrafitra ny Holafitry ny Mpanao gazety, na Ojm notarihin’ny filohany Gérard Rakotonirina. Ny fangatahan’ireto farany moa dia ny mba hisian’ny mpikambana avy ao aminy hiditra an-tsehatra amin’ny fanaraha-maso amin’ny fijerena mazava ny lisitry ny mpanao gazety matihanina. Eo ihany koa ny hisian’ny rafitra mpanara-maso hanampy ilay kaomision’ny karatra mpanao gazety efa tafatsangana iny. Tapaka nandritry ny fihaonan’ny Ojm tamin’ny minisitry ny Serasera araka izany fa hisy ny komity mpanara-maso hijery ifotony ny lisitry ny mpanao gazety omena karatra, izay ahitana ny filoha lefitry ny Ojm, ny mpanolotsaina, ny “Délégués de Communication”, ny talem-paritry ny Serasera, ny filohan’ny fikambanana mpanao gazety any amin’ny faritra sy ny eto Antananarivo. “ Tsy hifanitsaka amin’ilay kaomisiona efa natsangana akory ny asan’ity komity vaovao ity fa kosa hifameno amin’izy ireo. Ny tanjona dia ny hananana lisitra mazava, eken’ny rehetra”, hoy ny fanazavan’ny minisitry ny Serasera.